Gurgurtaa Aksiyoonaa | | Awash Tenders
Oromia Cooperative Bank
Kallacha Oromiyaa Jan21,2021
Beeksisa Caalbaasii Gurgurtaa Aksiyoonaa
Falmii raawwii Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Waldaa Hojii Gamtaa Oomishaa fi Gurgurtaa sookoo fi Taantalamii Waleenaa gidduu jiruun Manni Murtii Waliigala Oromiyaatti Dhaddachi Kibbaa Lakk Galmee 287825 dhaddacha gaafa 09/04/2013 ooleen gaheen aksiyoonaa Waldaa Hojii Gamtaa Oomishaa fi Gurgurtaa sookoo fi Taantalamii Waleenaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jiru gurguramee akka gabaasni dhiyaatuuf ajaja kennee jira. Kanaan Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A) gahee aksiyoonaa calbaasii ifaa taheen dorgomsiisee gurguruu barbaada
Gosa qabeenya caalbaasiif dhiyaatee
Lakkoofsa addaa abbaa Aksiyoonaa
Gatii Aksiyoona tokkoo Qarshiin
Caalbaasichi kan bahe
Guyyaa fi sa’aatii caalbaasiin itti
· Dorgomtootni guyyaa caalbaasii gatii ka’umsaa caalbaasichaa keessaa harka 25% CPO maqaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiin hojjachiisuuni ykn maallaqa callaa qabatanii argamuun caalbaasicha irratti argamuu danda’u. Caalbaasichi guyyaa armaan olitti eerame kana Waajjira Muummichaa Baan ichaa Karaa Boolee naannoo Filaamingoo gamoo Get Housetti argamutti gaggeeffama.
· Caalbaasichi guyyaa fi iddoo armaan olitti ibsametti iddoo abbootiin idaa ykn bakka bu’aan isaanii argamanitti ni gaggeeffame. Abbootiin idaa ykn bakka bu’aan isaanii yoo hin argamne iddoo isaan hin jirretti gaggeeffama.
· Dorgomtootni lammii Itoophiyaa ykn dhalataa Itoophiyaa tahuu isaanii kan mirkaneessu raga dhiyeeffachuu qabu. Dorgomaan dhaabbata bakka bu’ee caalbaasicha irratti hirmaatu ceyyama daldalaa haaromee fi bakka bu’iinsa dhiyeeffachuu qaba.
· Dorgomtootni caalbaasii mo’atan gatii caalbaasicha ittiin mo’atan guyyaa shan(5) keessatti Baankiif galii ni taasisu. Dorgomaan caalbaasichaa mo’ate guyyaa jedhame keessatti guutumaan guututti hin kaffalu yoo tahe kaffaltiin caalbaasii egsisuuf CPO qabsise Baankiif galii ta’ee, Caalbaasiin irra deebiin kan gaggeeffamu taha.
· Dorgomtoota caalbaasichaan mo’atamaniif CPO’n ykn maallaqni qabsiisan yoosuma deebifamaaf.
· Dorgomaan caalbaasicha mo’ate bu’uura seeraatiin kaffaltii kaffalamu hunda kaffalee maqaa gara isaatti ni jijjiirrata.
· Baankiin filannoo biraa yoo argate caalbaasicha walakkaanis ta’ee guutumaa guututtii haquuf mirgi isaa eegame dha.
· Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 0115589294/0115586570 waajjira muummichaa Baankii bilbiluun gaafachuun ni danda’ama.
Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A)
Jijjiirama Guddaaf Kan Onnate!